▷ Kungani i-chip elandelayo ye-Qualcomm flagship ingabizwa ngokuthi i-Snapdragon Amakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili - 【Comparison】 2022
Kungani i-chip elandelayo ye-Qualcomm flagship ingabizwa nge-Snapdragon amakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili
Ngu: 39 (Periscopi)
Santos Torres, Care (Umbhali)
Ubuchopho be-silicon obungase bunike amandla i-smartphone yakho elandelayo busanda kwembulwa, futhi ngokuphambene nenhlebo, ngeke kuthiwe yi-Qualcomm Snapdragon amakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili.
Lena i-chipset entsha esibheke ngabomvu ukuyibona kumafoni azayo asezingeni eliphezulu njenge-Samsung Galaxy S22, OnePlus ten, Xiaomi twelve, nokuningi. Izobizwa nge-Qualcomm Snapdragon 1 Gen XNUMX, futhi ungafunda konke odinga ukukwazi mayelana nalokhu lapha.
Izindiza nezindawo zokuhlala zalo mcimbi wokwethulwa kwaxhaswa yi-Qualcomm, kodwa izinkolelo zibonisa umbono wombhali ongagunci.
Kodwa ngasiphi isizathu yanikezwa igama elisha? Isakhiwo esihlukile sokuqamba amagama singadida abantu, ikakhulukazi ngenxa yokuthi lona akuwona umkhiqizo wesizukulwane sokuqala. Eqinisweni, i-Qualcomm ibisenza ama-chipset anika amandla amafoni athile aziwa kakhulu kusukela ezinkulungwaneni ezimbili neshumi nambili.
Sikhulume neQualcomm mayelana negama elisha, yingakho inkampani inqume ukulidlulisela ku-XNUMX… nokunye okwengeziwe lapho.
Okokuqala nje, lisebenza kanjani leli gama elisha? I-Qualcomm Snapdragon 1 Gen 1 igama le-chipset entsha, futhi izizukulwane ezizayo zochungechunge lwe-Qualcomm olusezingeni eliphansi zizoqhubeka nalo mhlangano, isibonelo i-Snapdragon 1 Gen XNUMX noma i-Snapdragon XNUMX Gen XNUMX.
Lolu shintsho esakhiweni samagama luzosetshenziswa ekuguqulweni ngakunye kobuchwepheshe benkampani kusukela kwalokhu kukhishwa. Kuvele ukuthi yethulwa okokuqala ochungechungeni lwe-Snapdragon eyisishiyagalombili.
Isewuchungechunge lwe-Snapdragon Eight hundred and eighty-XNUMX Plus eyethulwe ekuqaleni kwalo nyaka, okuyenza ibe yinkampani ehamba phambili ezinkulungwaneni ezimbili namashumi amabili nambili.
UZiad Asghar, iphini likamongameli wokuphathwa kwemikhiqizo kwaQualcomm, utshele iLaComparacion: “Abantu bayazi ukuthi okuyisishiyagalombili izinga eliphezulu kakhulu esinalo. Ngakho-ke sicabange ukuthi sizokwenza lokho kube lula, masiyibize nge-Snapdragon eyisishiyagalombili.
“Lokhu kuzobizwa nge-Snapdragon eight Gen 1, bese kuthi, njengoba siqhubekela phambili, sizoyibiza ngeGen two, Gen three, njalo njalo. Ngicabanga ukuthi kwenza izinto zibe lula ngempela futhi akudingekile ukukhumbula izinombolo ezi-3.
Noma ngokwethiyori amadijithi angu-4, kucatshangwa ukuthi kufanele aye phezulu ngemva kwe-Snapdragon engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili.
Abasebenzisi ngokusobala bayayithanda
Ngokocwaningo olwenziwa abakwaQualcomm, umphakathi ujwayele ukukhetha lesi sakhiwo esisha sokuqamba ngesilinganiso sokuyisihlanu kuya ku-1. Abathanda izingcingo bangase bakujwayele kancane, kodwa umqondo wukuthi kuzokwenza kube lula kumthengi ukuthi aqonde ukuthi ifoni ithini. i-silicon. iyasebenza kudivayisi yakho.
U-Debra Marich, umqondisi omkhulu wezokumaketha kwemikhiqizo kwa-Qualcomm, utshele i-LaComparacion ngesikhathi kuqhubeka isithangami nge-chipset entsha: “Siqinisa uhlobo lwethu lwe-Snapdragon njengomkhiqizo ozimele wabasebenzisi futhi sizosebenzisa ngokunenzuzo ubulungisa . Esikufake kumkhiqizo wakamuva we-Snapdragon eminyakeni eyishumi edlule.
Akulona nje igama elijwayelekile lamapulatifomu e-Snapdragon aguqukayo. U-Asghar uqinisekise kuLaComparacion ukuthi inkampani iphinde iguqule amagama ezinye izakhi zayo ezakha isiteji.
U-Asghar uthe: 'Ngaphansi besinobuchwepheshe obufana ne-Hexagon XNUMX processor. Ngakho sithatha lawa [amagama] futhi, manje asehlotshaniswa nawo nesizukulwane ngasinye se-Snapdragon eyisishiyagalombili. Lokho kwenza kube lula ngempela.
Lindela ukubona lesi sakhiwo esisha sokuqamba amagama emikhiqizweni ye-Qualcomm ngekusasa elibonakalayo. Ngeke sibe ne-Snapdragon engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili, kodwa ifana ncamashi ne-chipset ngaphandle kwegama, futhi sizobe sibheka i-Snapdragon eyisishiyagalombili Gen ezimbili ekupheleni kwamashumi amabili nambili.